Xafiiska Dhalinyarada Hoyla'aanta ah - Ka Hortagga - Waaxda Ganacsiga Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|U adeegida Bulshooyinka|Caawinta Guri La'aanta|Xafiiska Dhalinyarada Hoy La'aanta ah|Xafiiska Dhalinyarada Hoyla'aanta ah - Ka Hortagga
Hadafkeenu waa inaan hubino guryo xasilloon oo xasilloon oo loogu talagalay dhammaan dhallinta da 'yarta ah ee ku nool guud ahaan gobolka Washington si ay ugu barwaaqoobaan muddada dhow iyo muddada fog iyada oo aan loo eegin meesha ay ku yaalliin, da'da, jinsiyadda, qowmiyadda, kala duwanaanshaha naafonimada, naafonimada, aqoonsiga jinsiga ama nooca galmada. Baro wax badan oo ku saabsan sababaha asalka u ah hoy la'aanta dhalinyarada, barnaamijyada ka hortagga ee gobolka Washington iyo talooyinka hore halkan. Qorshaha istaraatiijiyadeed ee kama dambaysta ah ee ka -hortagga dhallinyarada iyo deggenaanshaha dadka waaweyn ee dhallinyarada ah ayaa la heli karaa halkan.
La-naqshadeynta khabiiro noolaa
La shaqee daneeyayaasha dhinaca nidaamka
Soo aruuri ra'yi-celinta khabiiro badan oo noolaa oo ka kala yimid gobolka oo dhan
Luulyo - Diseembar 2020
Fahmida nidaamyada gobolka
Diisambar 2020 - Maajo 2021
La-naqshadeynta khubarada ku noolaa si aan ku habboonayn saameyn ku yeelashada hoy la'aanta
Meey 2021-July 2021
Ka ururi ra'yi-celinta khabiirada noolaa, bulshada iyo ururada u doodista
Ogosto - Sebtember 2021
Qorshaha istiraatiijiyadeed ee ugu dambeeya ee looga hortagayo hoy la'aanta dhalinyarada
Fahamka guri la’aanta dhalinyarada
Wax badan ka baro guri la'aanta dhalinyarada ka dib markaad ka baxdo nidaamka guud ee daryeelka
Akhriso talobixin khibrad leh oo ku saabsan joojinta hoy la'aanta dhalinyarada ee nidaamyada
Isirrada dhismaha - Cunsurrada qaabdhismeedku waa arrimo waaweyn oo nidaamsan oo aan lagu kala bixi karin aragtida qofka. Waxay ka mid yihiin waxyeelo taariikhi ah, dhaqanno, siyaasado iyo geeddi-socodyo saameyn ku leh bulshada maanta. Waxyaabaha qaabdhismeedka ayaa sidoo kale go'aamiya noocyada waxqabad ee shaqsigu qaadi karo si looga jawaabo dhibaatada ama falalka kala duwan ee xitaa ay tixgelin karaan.
Dhallinyarada da'doodu u dhexeyso 18-24 sano waa kuwa dakhligoodu hooseeyo ama ku nool fakhriga Washington.
Ciladaha nidaamka - Nidaamyada waxaa ka mid ah wakaaladaha dowladda u qaabilsan dejinta iyo hirgelinta barnaamijyada iyo adeegyada loogu talagalay dadka heer gobol iyo heer degmo. Nusqaamaha nidaamka ayaa dhaca marka baahiyaha aasaasiga ah ee dhalinyarada iyo qoysaska aan lagu fulinin barnaamijyada jira iyo adeegyada ay bixiyaan hay'adaha kala duwan ee ka kooban nidaamyada ballaaran.
Madow, Dhalad, Jasiirad Baasifig / Dhaladka Hawaiianka dhalinta yar ayaa laga saaraa guryahooda waxaana la galiyaa meel ka baxsan daryeelka guriga iyada oo laba jibaar laga dhigayo heerka dhiggooda cad.
Isirrada shaqsiga iyo xiriirka - Isirrada shaqsiyadeed waa astaamo heer shaqsiyeed oo saameeya khibradaha qofka dhallinta yar. Tusaale ahaan, arrimaha caafimaadka habdhaqanka ee aan la ogaan ee qofka dhalinyarada ah ayaa saameyn ku yeelan doona arrimaha la xiriira qoyska dhexdiisa, kordhinta isku dhaca qoyska iyo abuurista jawi keenaya in qofka dhallinyarada ahi ka tago guriga ama la saaro. Waxyaabaha xiriirka la leh sida dhimashada daryeel bixiyaha ama rabshadaha qoyska ayaa ah arrimo dad dhexdooda ah oo sidoo kale saameyn xun ku yeelan kara degganaanshaha guryaha.
Marka loo eego Qeybta Dhaqancelinta Xirfadaha 9,286 dhalinyaro ah (oo ay da 'ahaan u yihiin 14- 24) oo naafo ah ayaa si aan degganeyn loo dejiyay 2018
Ma waxaad tahay khabiir ku noolaa dhalinyarada guri la’aanta ah ama daryeel bixiye taageeraya qof dhalinyaro ah oo haysta ama la kulmaya hoyla'aan.
Waxaan jeclaan laheyn inaan kula xiriiro.
Ka hortagga hoy la'aanta dhalinyarada waa iskaashi u dhexeeya:
Caawimaad Ma U Baahan Tahay?
Shuruudaha iyo qeexitaannada
Dhalinyarada iyo dhalinyarada waaweyn ee da doodu u dhaxeyso 12-24 sano.
Waxaa loo isweydaarsaday dhalinyarada waaweyn. Dhallinyarada da'doodu u dhexeyso 12-24 sano.
Dhallinyarada da'doodu ka yar tahay 30 sano ee soo maray xasillooni darro xagga guryaha ah oo u dhexeysa da'da 12-24 sano
Waalidiinta, ayeeyooyinka ama ayeeyada ama qoyska la xushay oo dhallinyarnimadooda khibrad u leedahay degganaansho la'aanta.
Khabiiro ku noolaa, ururada bulshada iyo Xafiiska Naqshadeynta dhalinyarada ee siyaasada, adeegyada iyo xalka si wada jir ah.
Nidaamka daneeyayaasha nidaamka
Wakiillada wakaaladda gobolka ee ka shaqeeya hay'adaha sida nidaamka daryeelka korinta, caddaaladda carruurta, caafimaadka dabeecadda, maamulka naafada, shaqada iwm.
Ma waxaad tahay adeeg bixiye u adeega dhalinyarada ama daryeelayaasha gobolka Washington? Waxaan rabnaa inaan kaa maqalno.
Ma xiiseyneysaa inaad la socotid wixii ku soo kordha ama aad wax badan ka barato hindisaha?